ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၅)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၅)
အောင်စိုး ကျွန်တော့်ကို အရက်မသောက်ဖို့ အတန်တန်မှာ၍ အိမ်မှ ပြန်သွားလေပြီ။ ငါ ဘ၀တော့ ပျက်တော့မှာလား ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အဖေနဲ့ အမေသာပြန်လာလို့ ဒီလိုပုံကိုသာ မြင်မိရင် ရင်ကျိုးမှာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ခံစားရတာက ရင်နဲ့ မချိအောင်ပါပဲ ကိုယ့်ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူက သူများနဲ့ ချစ်ရည်လူးနေတာကို ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ ဘ၀။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရ သလိုလို ချစ်ခွင့်ရသလိုလိုနဲ့ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အဖြစ်မျိုးလောက် ခံစားရတဲ့ ခံစားမှုကအဆိုးဆုံးထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုလည်း မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ... ဇင့် ကိုစိတ်နာသင့်ပါပြီ။ ဒီလောက် စုတ်ပြတ်သတ်ပြီး ရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ဒီလောက်အတိုင်းအတာထိ ပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထားခဲ့။
အမေသာသိရင် သေပြီ။ အမေက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းမိန်းမ ယူစေချင်တယ်။ သူအမြဲပြောနေတဲ့ စကားရှိတယ်.. သား ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာ ရုပ်လှတာ မချောတာတွေ အရေးမကြီးဘူး.. အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာ ကောင်းပြီး မိန်းကလေးပီသရမယ် တဲ့။ အမေပြောတာ ဇင် လို မိန်းကလေးတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဇင့်ကိုပဲ ချစ်တယ်... နှလုံးသားထဲက ချစ်နေတာ.. ခက်ရပါပီ.. အံကို တင်းတင်းကြိတ်မိရင်း ... မထူးတော့ဘူးလေ.. ပေါက်တဲ့ နဖူး ဆက်သာပေါက်ပစေတော့...ငါ့ နှလုံးသားတွေ သူမရှိတော့တဲ့နောက်မှ နာကျင်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတော့ အရောက်မခံဘူး.. ဇင့် ဆီကို သွားမယ်... သူတို့ကို မရရအောင် တားမယ်..။
ညနေဘက် ဇင့် အိမ်ဘက် ကားလေးနဲ့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်.. ဇင်ရေ မင်းကြိုက်တဲ့ ပုဆိုးဝတ်လာတယ်ကွာ။ မင်းရှောင်နိုင်ရင် ရှောင်ထားတော့.. ဟု စိတ်ထဲကြုံးဝါးရင်း မဲ့မိတယ်.. ဇင့် လမ်းထိပ်ရောက်တော့ အရင်ရပ်ဖူးတဲ့ ဆိုင်ကို မ၀င်ရဲ မနေ့ကညက ရန်ပွဲကကောင်တွေ မှတ်မိလို့ကတော့ ထမင်းစားဖို့ သွားတစ်ချောင်းတောင်ကျန်မည်မဟုတ်။ ကားကိုလမ်းဘေးတင်ရပ် တစ်ချက် အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး ကားပေါ်မှာ အမြဲပါတတ်တဲ့ ဦးထုပ်လေးကို ဆောင်းခါ ဇင့် အိမ်ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်..။
ဇင့်အိမ်ရှေ့ ခြံတံခါးကတော့... ဟာလာဟင်းလင်း ဖွင့်ထားတဲ့ မိန်းမ.... လုပ်ပါ..လုပ်ပါ ခေါ်နေတဲ့ မိန်းမတို့ ....ထုံးစံအတိုင်း ခြံတံခါးလေးတောင် ပိတ်မထား။ စိတ်ထဲ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ဒေါသလည်းထွက်လာတယ်။ အိမ်ပေါ်တက်တက်ချင်း ဇင့် ညီမလေးကိုတွေ့တယ်..။ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြုံးပြပြီး။ ကျွန်တော် လှည့်ပတ်ကြည့်တော့ ဇင့်ကို မတွေ့သလို ဇင့်မေမေကို လည်းမတွေ့..
“ဦးလေး လာလေ.. ထိုင်ပါ ဦးလေး..”
“သမီး မကြီး မရှိဘူးလား ဟင် ...”
“ရှိတယ် ဦးလေးရဲ့ မကြီး နောက်ဖေးမှာ ရေချိုးနေတယ် .. ပြီးတော့မယ် ထင်တယ် သမီး သွားပြောလိုက်အုန်းမယ်....”
“နေနေ သမီး.. ရတယ်.. ဦးက အေးဆေးပါပဲ...သူ အေးဆေးချိုးပစေ ..ဒါနဲ့ ..သမီးတို့ အမေကော မတွေ့ပါလား....အန်တီ. နေကောင်းသွားပြီလား..”
“မေကြီးလား ..နေကောင်းသွားပြီ ဦးရဲ့.. ဦးဝယ်ပေးတဲ့..ဆေးတွေက တော်တော် ကောင်းတယ်ပြောတယ် ... ဦးကို ကျေးဇူးတင်နေတာ မေကြီးက.. ခုမေကြီးက တရားစခန်း ၁၀ ရက်ဝင်နေတယ်.. ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က မေကြီးညီမနဲ့.. နောက် တစ်ပတ်လောက်မှ ပြန်လာမှာ ဦးရဲ့.... ”
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်မိတယ်.. အင်း.ဇင့် အမေမရှိဘူးဆိုတော့ တစ်မျိုးကောင်းတာပဲ .. ဒီကလေးပဲ ရှင်းထုတ်ရမှာပဲ.. ဘယ်လို ကြံရပမလဲ...စဉ်းစားစမ်း.. ကလေးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မုန့်သွားဝယ်စားခိုင်းရင်လည်း မကောင်းဘူး ခုခေတ်ကလေးတွေက ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်တော့ ဗဟုသုတက ရနေပြီး ရိပ်မိသွားရင်မကောင်းဘူး.. ဟုတ်ပြီ...
“သမီးက ခု ဘယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီလဲ.. ”
“အော် ရှစ်တန်းလား ... တော်တာပေါ့ .. မှန်း... ကြည့်ရအောင် သမီးကွန်ပါဘူး....”
ဇင့် ညီမလေးရှေ့ မှာချထားတဲ့ စာအုပ်တွေဘေးမှာ ကွန်ပါဘူး အဟောင်းလေးကို ယူကြည့်မိတယ်...
“အယ်.. သမီးရယ်... သမီး ကွန်ပါဘူးကလည်း အဟောင်းကြီးပါလား... အသစ်လေး ဘာလေးကိုင်ပေါ့ .. သမီးရယ်....”
“ဟီးးး... ရပါတယ်.. ကိုင်တော့ ကိုင်ချင်တာပေါ့ ..”
“ဘာလဲ သမီး မကြီးက မ၀ယ်ပေးလို့လား..”
“မကြီးကို သနားလို့ပါ.. သမီးက.. မပူဆာချင်တာ.. ဟိုဘက်အိမ်က သူငယ်ချင်းဆို သူ... တစ်မှတ်တိုင်ကျော် စတိုးဆိုင်က ၀ယ်လာတာ ... တစ်သောင်းနဲ့ တစ်ထောင်ပေးရတယ်.. ဦးလေးရယ်... လှလိုက်တာလေ.. ကိုရီးယားမင်းသားလေး ကျနေတာပဲ..ဟိဟိ.. ဖွင့်လိုက်ရင်လေ.. မွှေးနေတာ အထဲမှာလဲ အစုံပဲ ခဲတံ ဘောပင်… အစုံပဲ ဦးလေးရယ်.. မှန်တောင် ပါသေးတယ်.. အဟိဟိ...”
ဇင့် ညီမလေး စကားတအားတတ်တာပဲ.. သူပြောတာ နားထောင်ရင်းမှ သတိထားမလို့.. ဟာ..ဟုတ်ပြီ.. တွေ့ပြီ..
“အယ်... သမီးရယ်.. ၀ယ်ပါ့လား... ”
“ကဲ ..သမီး... ဦလေးဝယ်ပေးမယ်... ”
“ရော့.. သမီး... တစ်သောင်း ငါးထောင်.. သမီးဘာသူသမီး သွားဝယ်ခု ပိုတာ သမီးတခြားကြိုက်တာ ၀ယ်ခဲ့ အချိန်ရသေးတယ်...”
“ဟွန်း.. မကြီးဆူလိမ့်မယ် ဦးရဲ့...”
“သမီး မကြီးမလာ ခင်မြန်မြန် သွားဝယ်လေ.. သမီးရယ်... ဦးမပြောဘူး သမီးမကြီးကို... သွား... ”
ဇင့် ညီမလေးမှာ ယူလဲယူချင်တယ်.. သူ့ အစ်မဆူမှာ ကြောက်လို့ ထင်တယ်.. တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်နေလို့.. သူ့လက်ထဲကို အတင်းထည့်ပေးပြီး..
“ကဲ.. ခုသွားဝယ်..သွား... ဦးလေး..စောင့်နေမယ်.. သွား...”
“ဟီးးးးး... ဟုတ်ကဲ့.. ကျေးဇူးပဲနော်... မကြီးကို ပြောနဲ့နော်.. ပြောသာပြောတာ သမီးဆိုင်ကို မသိဘူး.. သမီးသူငယ်ချင်းကို ခေါ်သွားပြီး သွားဝယ်မယ်နော်... သမီးပြန်လာတဲ့အထိ ဦးစောင့်နေ အုန်းနော်... .. သွားပြီ ဦး...”
တယ်ဟုတ်တဲ့ငါပါလား.. ကဲ ဇင်ရေ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး... မင်းဘ၀တော့ ပျက်ပြီလို့သာမှတ်တော့.. ဟိုရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုထဲကလို လူကြမ်းတော့ ရောက်လာပြီ.... ဟားဟားဟား.. ပြောနေတုန်း ဇင့် အသံကြားရပါပြီ...
“ညီမလေး ...ညီမလေးရေ... မကြီးအတွက် သနပ်ခါးသွေးထားလား......”
ပြောရင်း ရင်လျားလေးနဲ့ နောက်ဖေးမှ တဆင့် အိမ်ထဲသို့ ၀င်လာပြီး သူ့အခန်းပေါက်ဝတွင် ရပ်နေပြီး ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားတော့ ဇင် လက်ကလေးကို ရင်ဘတ်ကို အုပ်ရင်း တန့်သွားတယ်.. ကျွန်တော်ဇင့်ဆီ သွားလိုက်တယ်..
“ရင်လျားလေးနဲ့ လည်း တမျိုးလှတာပဲနော်...”
“ကိုကြီးပြန်တော့ ... ညီမလေးကော ဘယ်ရောက်သွားလဲ...”
“မုန့်သွားဝယ် ခိုင်းလိုက်တယ်... ကိုကြီးတို့ သုံးဆယ်ငါးမိနစ်တော့ အချိန်ရမယ် ထင်တယ်...ဇင်ရဲ့ ”
မျက်ခုံးလေးပင့်ပြရင်း သူ့ကို လှမ်းဖက်မယ် လုပ်တော့ ဇင် နောက်ကို ဆုတ်သွားလို့... ကျွန်တော်တစ်ချက် ဒေါသ ထောင်းကနဲ့ ထသွားတယ်.. ငါက ဘာဖြစ်နေလို့လဲ.. နင်ကများ... ရှေ့တိုးပြီး ဇင် လက်လေး ရင်မှာ အုပ်ထားတဲ့ ကြားက သူ့ရင်ညွန့်က ထမီကို လှမ်းဆွဲလိုက်တော့...
“လွှတ် .... လွှတ်နော်.. ကိုကြီး.. အော်မှာ....”
“အော် ..စမ်းပါ...ခု အော်လိုက်စမ်းပါ...”
ဇင်...မအော်ရဲပါ .... သူ့ထမီအထက်ဆင်စက ကျွန်တော့ လက်ထဲမှာမို့ ထပ်ဆွဲလိုက်တော့ ဇင် ထပ်ရုန်းပြန်လို့ ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ခါ အားနဲ့စောင့်ဆွဲလိုက်ရာ ဇင့် ထမီကျွတ်ထွက် သွားတော့လေသည်..။
ဇင့် ထမီကို ပြန်ကုန်းကောက်ဖို့ အလုပ် ကျွန်တော်သူ့ကို ဖက်ပြီး ချုပ်ထားလိုက်တယ်။ ဇင် ရုန်းနေတုန်း ကျွန်တော့လက်က ဇင့်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို လက်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ဇင် ထပ်ပြီးရုန်းနေလို့ သူမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း ဇင့်ရွှေခရုလေးရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း ပွတ်သပ်နေရာမှ လက်ခလယ်နဲ့ အထဲကို ထိုးနှိုက်လိုက်လေသည်။ ဇင် ..ကျွန်တော့်ကို အံကျိတ် မျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ ကြည့်နေပြီးမှ မျက်နှာလေးမဲ့ပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ပေါ် ခေါင်လေး မှီသလိုနေရတော့တယ်။ ဇင့် ရွှေခရုလေးဆီကဘာချောဆီမှ မထွက်သေးတော့ သူ့အတွက်ခံရခက်နေမယ် ဆိုတာ သိနေပေမဲ့ လောလောလတ်လတ်ရေချိုးထားတာကြောင့် ရေအနည်းငယ်စိုစွတ်နေတာ ကြောင့် ဇင်သက်သာသေးသည်။
ကျွန်တော်က သူ့ကို နာနာကျည်းကျည်းကို ဖြစ်စေချင်တာ ... သူ ခေါင်လေးမော့ပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေ ကိုင်ရင်း အသနားခံသလို ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ သူ့ကိုသေချာစိုက်ကြည့်၍ အံကြိတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်လက်ခလယ်ကို ထပ်ထိုးထည့်ပြီး အပေါ်ကို ဆွဲမလိုက်တာကြောင့် သူ့လက်ကလေးက ကျွန်တော့်လက်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး အတင်းပြန်ချွတ်နေတယ်။ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နာနေတဲ့ သဘောရှိတာနဲ့ အသာလေး ပြန်လျော့ချ လက်ချောင်းလေးကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ဇင့် ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဇောင်းလိုက် ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ သူ့စိတ်တွေ လျော့လာရပြီ ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ဖြည်းညင်းစွာဝင်ရောက်လာပြီး ဖက်ထားတော့တယ်။ နောက် သူလက်ကလေးတွေကလည်း အငြိမ်မနေတော့ပေ။ ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို လှမ်းစမ်းနေရင်း ကျွန်တော့် မျက်နှာကို မော့ကြည့်ရင်း.....
“ကိုကြီးရယ်... ခက်ပါပြီ.. ညီမလေး ပြန်လာရင် မကောင်းဘူး မြန်မြန်လုပ်တော့နော်...”
ပြောပြော ဆိုဆိုနဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲခါ... ကုတင်ဇောင်းနားတွင်ပင် ပေါင်ကို တန်းကားပေးထားတော့တယ်... ကျွန်တော် ပုဆိုးကို အမြန်ချွတ်ပြီး ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဇင့်ရှေ့တွင် လေးငါးချက်လောက် ဂွင်းတိုက် လိုက်တယ်။ ဇင် ကတော့ မျက်နာငယ်လေးနှင့် အတင်းဆွဲလို့သာခေါ်နေတော့တယ်။
ကျွန်တော်ချက်ခြင်း မလုပ်ချင်သေးပါ။ ဇင့် ရွှေခရုလေးကို မြင်မိတော့ နမ်းချင်တဲ့ စိတ်တွေက တဖွားဖွားဖြစ်လာတာ ကြောင့် ဒူးလေးထောက်ပြီး လျာလေးနဲ့ ဇင့်ရွှေခရု အစိလေးက အစ နှုတ်ခမ်းသားတွေကတဆင့် အထဲကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးထည့် ပစ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လောက်မှ ကြာကြာမလုပ်လိုက်ရ ဇင် ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အတင်းဆွဲယူပြီး လုပ်ခိုင်းနေတော့တာမို့ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဇင့် ရွှေခရလေးထဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်။ ဇင့် အိမ်မှာ လုပ်ရတာ စိတ်ထဲ အရသာတစ်မျိုး ဖြစ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဇင့်အိပ်တဲ့ မိန်းကလေး အိပ်ခန်းမို့ထင်တယ်။ ကိုယ့်ဒုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းထည့်နေတော့ စိတ်ထဲ အထဲကိုဖြဲဝင်သွားသလို ခံစားရတယ် အဆုံးထိအောင် ထည့်ပြီးပူးကပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးမှ အချက်မှန်မှန်လေး ဆောင့်ထည့်နေရင်းမှ ဇင့်နို့ကို ကုန်းစို့မယ် လုပ်တော့.. မစုပ်နဲ့ အုန်းတဲ့.. မြန်မြန်လေး အရင် ဆောင့်အုန်း ဆိုတာနဲ့ ခပ်မြန်မြန်လေး အားနဲ့ ဆောင်နေလိုက်တာ ဇင့် ကုတင်လေး သံစုံတီးဝိုင်းလေလို ဖြစ်လာလို့ အရှိန်နည်းနည်း ပြန်လျော့ပြီး ဇင့်ကို ကုတင်အောက်ကို ဆွဲခေါ်ပြီး ကုတင်ကို လက်ထောက်ခါ ဖင်ကုန်းထားခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ထိုးထည့်၍ အားကုန်ဆောင့်ထည့် လိုက်တော့တယ်။
“ကိုကြီး ..ပြီးခါနီးရင် ပြောနော်....”
“ပြီးခါနီး ရင်သာပြောပါ.. မြန်မြန်လုပ်..”
ခုမှ လုပ်တာမကြာသေးဘူး ပြီးရင်ပြောက အရင်လာနေတယ်.. စိတ်ထဲ တင်းခနဲ့ ဖြစ်ပြီး မပြီးအောင် စိတ်ကိုအတည်ငြိမ်ဆုံးထားပြီး စိတ်ထဲ ဒီလုပ်နေတဲ့ အထဲမှာ အာရုံမရောက်အောင် ဇင့် အခန်းထဲကို မျက်လုံးက လိုက်လျောက်ကြည့်နေမိတယ်။ ဇင်ကတော့ ဖင်ကုန်းပြီး ငြီးသံသဲ့သဲ့လေးနဲ့ အတူ အပီပြင်ယူနေတယ်။ တချက် တချက် နောက်ပြန်တောင် ဆောင့်လိုက်သေး.. ကျွန်တော်ကတော့ ဇင့် မှန်တင်ခုံမှာ ဘာတွေတင်ထားတာလဲ ဇင့် သဘက်စောင်လေးက ဘာအရောင်.. မျက်နှာကျက်တွေ လိုက်ကြည့်နေတယ်။ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ပါ ကိုယ့်အကောင်က ပြီးချင်လာသလို ရှိလာတာကြောင့် အချိန်တွေကို နှမျောတာနဲ့ ဒုတ်ကို အထဲထိ ထိုးထည့်ထားရင် ခဏရပ်ထားလိုက်တယ်။ ဇင်နောက်လှည့်ကြည့်ပြီး.. လုပ်လေ..ဘာလုပ်နေတာလဲ..တဲ့... ဘာမှ မဟုတ်ဘူးး မောလို့ ဆိုတော့… သက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီး...
“လုပ်ချင်တော့လည်း သူပဲ... ဒီမှာ ဇင် ပြီးခါနီးမှ ဟာ.... ၀ူးးးးး. အားး.....”
ဇင် စိတ်မရှည်တော့ပါ ကျွန်တော့်ကို.. ခဏနားထားလို့ ထင်တယ် ပြီးချင်တာ ခဏရပ်သွားလို့ ဇင့် ပေါင်တဖက်ကို မြှောက်ပြီး နောက်ကနေ ထပ်နေလုပ်နေတုန်း အချက် နှစ်ဆယ်လောက်မှာ ဘယ်လိုမှကို မရလို့ လူလည်း အရှိန်လေးနဲ့ လုပ်လာတော့ ဇင် သိသွားဟန်တူတယ်... ဒုတ်ကို အမြန်ဖြုတ် ကျွန်တော့်ရှေ့ ဒူးထောက် ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို အငမ်းမရ ဆွဲယူကာ စုပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှကို မပြောတော့ပါ။ ပြီးလဲ ပြီးချင်နေပြီမို့ ဇင့် ခေါင်းလေးကို ကိုင်ရင်း ..
“ကိုကြီး ပြီးတော့မယ် ဇင်... ပြီးတော့မယ်နော်...”
ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို စုပ်နေရင်း တန်းလန်း ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြတယ်..သူသိတယ် သူ့ပါးစပ်ထဲသာ ထည့်တော့ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပေါ့... ဇင့် စုပ်ချက်က သွက်လှသလို ကျွန်တော့်နောက်က ဖင်ကိုပါ ဆုပ်ကိုင် ကုပ်ခြစ်နေလို့ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ.. ဇင့် ပါးစပ်ထဲတွင် သုတ်တွေ အကုန်ထွက်ကုန်တော့တယ်။ ဇင် တကယ် နားလည်တာပဲ ပါးစပ်ထဲ သုတ်တွေ ရောက်နေတုန်းတောင် မရပ်ဘူး ဆက်ပြီး စုပ်ပေးနေတုန်းပါ.. သုတ်ထွက်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ သုတ်ထွက်ပြီး သွားလို့ ခဏတာအထိ အကောင်းဆုံး အချိန်မို့ ဇင် သိလို့ မရပ်ပဲ စုပ်နေလိုက်တာ ... ကောင်းတာတွေ ကျော်လာတော့ ကျွန်တော့ ဒုတ်ယားလာသလို ခံစားရတော့မှ သူခေါင်းလေးကိုကိုင်ပြီး တွန်းထားလိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်ပြီး ဖြည်းညင်းညင်သာစွာ နောက်ဆုံး သုံးချက်လောက်ဆုပ်ပြီး ပါးစပ်ကို တင်းကြပ်နေအောင် ကပ်စုပ်
ပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဒုတ်မှာ သုတ်တစက်လေးတောင် မကျန်အောင်ပါပဲ.. ရှင်းလင်းသွားတော့တယ်..။ ဇင် ပါးစပ်လေး ပိတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်လေးစို့ပြီး မောကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ဘာပြောလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူး။ နောက်မှ ဇင် သူလက်ဖ၀ါးလေးကို သူပါးစပ်ရှေ့ခံပြီး သုတ်တွေကို အပြင်ကိုထွေးထုတ်ပြီး ပြတယ်။ နောက် နီးစပ်ရာ အကျီလေးနဲ့ သုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအကျီလေးနဲ့ပဲ သူ့ပါးစပ်တွေကို သုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဆွဲယူပြီး ယုယုယယ သုတ်ပေးနေလိုက်တာ ကျွန်တော်ဖြင့် အားနာတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်မိသလို ရင်ထဲ ပိုပြီး ချစ်မိလာတော့ပါတယ်။
ဒီနေ့လည်း မျိုးကျော်ရုံးမတက်ပေ။ တင်မျိုးနိုင်မျက်လုံးတွေက ရုံးခန်းတံခါးဆီသာ ရောက်နေတယ်။ တံခါးဖွင့်သံကြားတိုင်း မျိုးကျော်များ ၀င်လာသလားလို့ ကြည့်ရတာအမော ... ကြာလာတော့ အောင်စိုး စိုးရိမ်လာတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ တင်မိုးနိုင် စားပွဲနားလာပြီး စာရင်းတွေ လာပေးဟန်ပုံစံဖြင့် မကြားတကြား လေသံလေးနဲ့...
“ဒီကောင်နဲ့တော့ ခက်ပြီ... ဒီနေ့လည်း မလာပြန်ဘူးထင်တယ်.. ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်တဲ့လူတွေ အတော်ဆိုးတာဆိုတာ ခုမှပဲ မြင်ဘူးတော့တယ်”
အောင်စိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပါ ပြောလိုက်သော စကားကြောင့် တင်မိုးနိုင် အောင်စိုးကို မျက်နှာလေးငယ်ပြီး မော်ကြည့်နေမိသည်။
“ပြောစမ်းပါအုန်း... နင်တို့တွေ ဘာဖြစ်ကြတာလဲ... ဒီကောင်ကြီးနင့်အပေါ် စိတ်တွေ တအားယိုင်လာတယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ နင်ကလည်း ငါတို့ကို လျှိုရမယ့်သူတွေမှ မဟုတ်တာ။ .. ခုကြည့် ငါတို့မှ ၀င်မထိန်းရင် အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေး ထွက်မယ်နော်.. ”
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ ၀န်ခံခြင်းဆိုတာ ဖြစ်သွားတာလား၊ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ စိတ်ထဲ ရှက်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ကြောက်ခြင်း သိက္ခာကျခြင်းလား လူမိသွားခြင်းလားဆိုတာမသိ။ အောင်စိုးကိုတောင် ထပ်မော်မကြည့်ရဲ့တော့ပဲ အသာခေါင်းငုံ့ပြီး စာရွက်ပေါ် ဘောပင်နဲ့ လျှောက်ခြစ်နေမိတယ်။
“နင်တို့ဟာ... အသက်လည်း မငယ်တော့ဘူး.. ဘာလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြန်အလှန် မာနတွေ ထားနေတာလဲ.. ဘာလဲ နင်က သူ့ကို လုံးဝကို မကြိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သူဒီလို ဖြစ်နေတာကို ဆက်မြင်ချင်နေသေးတာလား ... မဟုတ်ရင်လည်း ရှက်နေတာလား ... ဒါသဘာဝပါဟာ.. သနားပါတယ် ဒီကောင်ကြီး ကြည့်ပါဦး။ အချစ်ကျွန်ကြီးကို လုံးလုံးဖြစ်သွားတာ။ ငါတော့ အံ့သြသလို ဒီကောင် ဒီလိုစိတ်တွေ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ဘယ်လို မျက်စိလည် ရောက်လာပါလိမ့်နော်...”
အတွင်းရေးတစ်ခုကို သိသွားလို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဟန်နဲ့ အောင်စိုးပြောနေပေမဲ့ အောင်စိုးပြောတာ အမှန်တွေကြီးပါ။ တင်မိုးနိုင်စိတ်ထဲ မျိုးကျော်ပဲ ၀င်ရောက်နေတာမို့ အောင်စိုးကို စကားလည်း ပြန်မပြောတော့ပါ... ငါမှားတာပါဟု ပြောနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ သက်ပြင်းလေးချမိတယ်။ အောင်စိုးလည်း သက်ပြင်းလေးအသာချပြီး သူ့စားပွဲကို ပြန်သွားထိုင်နေတော့တယ်။
ဟုတ်တယ်.. အောင်စိုးရယ်.. ငါသူ့ကို ခု အရမ်းကိုချစ်လာတယ်.. အရမ်းကိုစွဲလန်းလာတယ်။ ဒါကိုယ့်ကိုကိုယ် ညာလို့ ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်သလို ငါ့နှလုံးသားကို ညာလို့ရတဲ့ ကိစ္စမှမဟုတ်တာ.. ဟုတ်ပြီ။ ခုချိန်ကစပြီး ငါ့ရဲ့ဦးနှောက်တွေ ငါရဲ့သိက္ခာတွေ ငါ့ရဲ့အရှက်တွေကို စွန့်ပစ်တော့မယ်။ ငါ့နှလုံးသား စေခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်တော့မယ်... ဟုတ်တယ်။
မျိုးကျော်တောင် သူ့ငါ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေကိုတောင် သူ့ဘ၀ပျက်လုနီးထိတောင် သက်သေပြနေတာပဲ.. ဟာ.. ဟုတ်တယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ငါမတရားဘူး..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်တိုလာမိသလို မျိုးကျော်ကိုလည်း သနားလာမိလို့.. တစ်ထိုင်ထဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မျိုးကျော်ကို မိမိရဲ့ဘ၀လေးနဲ့ ပေးဆပ်ပြီး သူ့ကိုပြန်လန်းဆန်းအောင် လုပ်ရမယ်...
မျိုးကျော်ရယ် ငါခုလိုတွေးတော့ဟယ် ငါစိတ်ထဲ ပေါ့ပါးသွားသလို အချစ်..ဆိုတဲ့ ခွန်အားကြောင့် ထင်ပါရဲ့ ငါသတ္တိတွေ ရှိလာတယ် ... နင့်ကို ငါအရမ်းချစ်တယ်ဟယ် ငါဘာမဆို လုပ်တော့မယ် နင့်အတွက်...
ဒီနေ့တော့ မျိုးကျော်တယောက် အင်းအားတွေ လန်းဆန်းမှုတွေနဲ့အတူ အလုပ်မဆင်းပဲ သင်္ကန်းကျွန်းဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ဇင်တို့ မိသားစုလေးအတွက် ဇင့်ကို အသိမပေးပဲ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးချင်လို့ ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ညက ဇင်ပေးတဲ့ ကတိစကားတွေ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူနေတော့မယ်.. သူ့ဘ၀မှာ ပြည့်စုံဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သူနားလည်လာပါပြီ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အထပ်ထပ်ပြောခဲ့တာလေးတွေ နားထဲကြားယောင်နေမိတယ်။ ညက ဇင့်ညီမလေးရောက်လာတော့ ပြန်တော့မယ် ဟန်ဆောင်ပြီး အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှာ ဇင့်ညီမလေး မအိပ်မချင်း နှစ်ယောက်သား ထိုင်စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ ဇင့်ညီမလေး အိပ်တော့ ဇင့်အခန်းထဲ နှစ်ယောက်သား တိုးတိုးတိတ်တိတ် ချစ်ရည်လူးရတာလေးကလည်း အရသာတစ်မျိုးမို့ တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာမရှိ။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ညက ဇင်အပြုအမူတွေ တကယ့်ကိုမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တူလွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း အိမ်ဦးနတ် ယောက်ျားတစ်ယောက်လို အပြုအမူမျိုးနဲ့ ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံလာတော့ မျိုးကျော် စိတ်ထဲ အရာရာကို ခွင့်လွှတ်တဲ့ စိတ်တွေဖြင့် ဘာမှကိုမမြင်တော့ပါ။ ဇင် မျိုးကျော်ရင်ခွင်ထဲမှာ တစ်ညလုံး ငြိမ်သက်စွာ အိပ်နေပုံလေးက ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချအပ်နှံထားသည်နှယ်။
ခေါ်နှိုးလည်း မထဘူး။ တွန်းနှိုးလည်းမထဘူး။ မျိုးကျော် တအားရယ်ချင်နေမိတယ်။ သူ့ လုပ်ရပ်ကို။ ဇင့်ကို နှိုးမရလို့ ဇင့်ရွှေခရုလေးထဲကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ သက်သက် နောက်ကနေ ဆက်ကနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တော့.. ဇင်မျက်လုံးလေးပြူးပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဘက်ကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ လာထုတော့ ကျွန်တော့မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ နောက်တော့ အတင်းဖမ်းချုပ်ပြီး အနမ်းလေး တရပ်စပ်ပေးလိုက်တော့ သူငြိမ်ကျသွားပြီး ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးလေးဖွင့် မော်ကြည့်နေပုံလေးက တကယ့်ကလေးကလေး တယောက်လိုပါလား။ ကျွန်တော့်ရင်ကို တကယ်ကို အေးမြစေတာပါ။ အချစ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်လိုက်ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ကပဲ ချစ်နေရရင် လုံလောက်သလို ကိုယ့်ချစ်နေရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုသေးသေးလေး ရရုံဖြင့်ပင် အရာရာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်တွေက အနိုင်ယူသွား တတ်တာပဲလို့ တွေးမိရင်း မျိုးကျော်ရင်ထဲ အင်အားတွေ တဖွားဖွားတိုးလို့သာလာတော့တယ်။ သင်္ကန်းကျွန်းဘက်ရောက်တော့ မိတ်ဆွေ ပွဲစားတစ်ယောက်လိုက်ပြတဲ့ တိုက်ခန်းကို လိုက်ကြည့်တယ်။ ဇင်တို့မိသားစုလေး နေပျော်မဲ့နေရာလေးမို့ နောက်နေ့ ဇင့်ကို ခေါ်လာပြီးပြမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်မိတယ်။ ဇင် ပျော်မှာသေချာပါတယ်။ ဒီအိမ်လေးက ဇင့် အမေနဲ့ ဇင်ညီမလေး အတွက်ပါ.. ဇင်ကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါ်ထားမှာမို့ စိတ်ကြိုက်အားလုံးဖြစ်စေရမယ်။
တိုက်ခန်းကြည့်ပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ ကားလေးမောင်းပြီး ပြန်လာတော့ အမှတ်တမဲ့ လမ်းဘေးက ရွှေဆိုင်ဘက် မျက်လုံးက ရောက်သွားတယ်။ ကားကိုခဏရပ်ရင်း စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ ဇင်နဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် စေ့စပ်လက်စွပ်လေး စိတ်ကူးထဲ ရေးခနဲ့ ပေါ်လာလို့ ကားပေါ်က ဆင်းကာရွှေဆိုင်ထဲ ၀င်မိတယ်။ ဆိုင်ထဲရောက်လို့ ဆိုင်က၀န်ထမ်းလေးက မေးတော့ “ စေ့စပ်လက်စွပ် ” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိလုပ်နေတော့ မျက်နှာကို ခပ်တင်းတင်းထားလိုက်တော့ ကောင်မလေးမျက်နှာပိုးသတ်ရင်း လက်စွပ်တွေကို ထုတ်ပြတယ်။ လက်စွပ်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်လဲ ကြိုက်မယ့် ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တဲ့ အခေါက်ရွှေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မောင်းကွင်းလေး နှစ်ကွင်းကိုသွား သဘောကျမိတယ်... ဘယ်လောက်သားရှိလဲ ဆိုတော့ နှစ်ကွင်း ငါးမူးသားပါတဲ့.. ဈေးနှုန်းမေးကြည့်တော့ သုံးသိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိတာကြောင့် ဒီထက် ဈေးကြီးတဲ့ တစ်ကျပ်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မောင်းကွင်း ၂ ကွင်းကို ကြည့်မိတော့ ပြူးပြဲပြဲကြီး ဖြစ်နေတော့ စောစောက ငါးမူးသားကို ၂ ကွင်းလုပ်ထားတဲ့ လက်စွပ်လေးကို ပိုသဘောကျမိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တခါထဲငွေချေပြီး ယူလာခဲ့တော့တယ်။ ညကြရင် ဇင့်အိမ်ကို သွားမယ် ဇင့်ကို အပြင်ကို ခေါ်ထုတ် နေရာကောင်းကောင်း ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ဇင့်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီး လက်စွပ်လေးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ၀တ်ပေးမယ်လို့ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကို ပြောနေမိတယ်။
ညဘက်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး ဇင့်အိမ်ဘက် ထွက်လာဖို့ ပြင်တော့တယ်။ လက်စွပ်လေးတော့ မေ့ကျန်မှာစိုးလို့ သေချာထည့်လာခဲ့တယ်။ ဇင့် အိမ်ရောက်တော့ဇင့်ကို မတွေ့ပေ။ ဇင့်ညီမလေးသာ အိမ်ထဲမှာ စာကျက်နေရင်း ကျွန်တော်လာမှန်းသိလို့ အိမ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းလာတယ်...
“သမီး... သမီး..မကြီး မရှိဘူးလားဟင်...”
“ဟင်.... ဦးလေးဆီ သွားတာမဟုတ်ဘူးလား..”
“သိပါဘူး မကြီးရယ် အ၀တ်အစားအိတ်နဲ့ ၈ နာရီလောက်က ထွက်သွားတာပဲ... ”
သိလိုက်ပြီ... ဇင့် ကျွန်တော့်ကို လိမ်သွားပြီဆိုတာ... ကျွန်တော် လူတစ်ကိုယ်လုံး အင်အားတွေ မရှိတော့သလို ခံစားရပြီး ပစ်လှဲချင်မိသည်။ ဇင်ရယ် ပိပိရိရိကို လိမ်သွားတာပဲ။ လုပ်ရက်လိုက်တာကွာ... ဇင့်ကို ဆုံးရှုံးလို့ ၀မ်းနည်းတာလား။ ရှက်တာလား၊ ဒေါသထွက်တာလားမသိ။ သေချာတာကတော့ ဇင့် ကို အဆုံးမခံချင်သလို ဇင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလူ့လောကမှာ မရှိမှ ကောင်းမှာ... လက်သီးကို ဆုပ်... အံကိုခပ်တင်းတင်းကြိတ်ခါ အနီးဆုံးကားဂိတ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဇင် တစ်နေ့ညက သူ့ချစ်သူကောင်လေးကိုပြောတဲ့ ပဲခူးကို သွားမည့်ကားကို စုံစမ်းကြည့်တော့ ထွက်သွားတာ နာရီဝက်လောက်ရှိပြီတဲ့.... တောက် တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီ.. ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မိမိကားနဲ့ဆို မှီနိုင်လောက်တာမို့ ပဲခူးဘက်ကို အပြင်းမောင်း ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
ညကြီး ရန်ကုန်ပဲခူးကားလမ်းမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မောင်းနေသလားအောင့်မေ့ရတယ်... ဘယ်သူမှမရှိ ... ကားကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းနှင်နေတာကြောင့် ကားလမ်းဘေး ၀ဲဘက်ဝဲယာက သစ်ပင်တွေ တရိပ်ရိပ်ကျန်ခဲ့ပုံတွေ ကိုယ့်ကို နောက်ပြောင်နေသလိုလို ဇင် လုပ်သွားတဲ့လုပ်ရပ်က ကျွန်တော့်အသည်းထိအောင် တဆစ်ဆစ်နာလှတာမို့ မျက်ရည်အလိုလို ကျလာမိတယ်။ လူက တဆတ်ဆတ်တုန်လာလို့ ကားကို အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထိန်းပြီး မောင်းနေတုန်း.. ရှေ့ကဓာတ်တိုင် ၁၀ လောက်အကွာမှာ လူတွေ ကားလမ်းပေါ်မှာ ပြည့်နေပြီး လမ်းပိတ်နေလို့ ကားကို အရှိန်လျော့လိုက်တယ်။ သေချာအနားရောက်လို့ ကြည့်မိတော့ လမ်းပေါ်မှာ လူ ၂၀ ယောက်လောက်က ဒဏ်ရာရတဲ့သူနဲ့ ကူညီဖေးမတဲ့ သူနဲ့... ကားလမ်းဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ခရီးသည်ကားကြီးတစ်စီး လမ်းဘေးရေမြောင်းကြီးထဲ ထိုးကျလို့နေတယ်။
ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ညတိုင်းမက်တဲ့ အိမ်မက်ထဲကနေရာပဲ။ ဇင်တို့ ကားမဟုတ်ပါစေနဲ့ ပါးစပ်ကအထပ်ထပ် ဆုတောင်းရင်း ကားကို လမ်းဘေးချရပ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကားပေါ်မှ ဆင်းခါ ကားမှောက်ရာသို့ ပြေးသွားမိသည်။ လမ်းပေါ်ကလူတွေကို ကြည့်တော့ သတိရတဲ့ သူက ရလို့ မရတဲ့သူက မရ။ ဒဏ်ရာမရတဲ့ သူက ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကို ပြုစုနေသလို အချို့က ရေရှိတဲ့ မြောင်းထဲ တစ်ဝက်ကျနေသောကားထဲမှာ ဒဏ်ရာရပြီး ကျန်နေတဲ့ လူတွေကို ဆွဲထုတ်နေကြပြီ။ အော်သူအော် ငိုသူကငို သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ ထပြေးတဲ့သူက ထပြေး ကမ္ဘာပျက်နေသလိုပါပဲ။ ဒဏ်ရမရတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်လိုက်တယ်။
ဒီကားက ဘယ်ကားဂိတ်က ထွက်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်သွားရှာတဲ့ ကားဂိတ်က ဖြစ်နေတော့ ဇင်တို့ ကားဆိုတာ သေချာသွားပြီးလေ.. လမ်းပေါ်ကလူတွေကိုသေချာလိုက်ကြည့်တော့ ဇင်မပါသေး ... ဒါဆိုရင် ... လမ်းဘေး ရေမြောင်းကြီးထဲ မှောက်နေတဲ့ ကားကိုတစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီး... ဇင် ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ တစ်ချက် ဆုတောင်းပြီး ခုန်ဆင်းပြေးသွားမိတယ်။
ကားနားရောက်မှ သေချာကြည့်မိတော့ ကားက ပက်လက်လန်နေပြီး ရေတ၀က်လောက် မြုပ်နေပြီ။ ကားထဲရေတွေဝင်ပြီး အထဲမှာကျန်သေးတဲ့ လူတွေဘယ်လိုများနေမလဲဆိုတာ စဉ်းစားလိုက်ရင် ကြောက်စိတ်တောင် ပေါ်လာလို့ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်။ ဘေးနားကလူကိုမေးကြည့်တော့ ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ ဆိုတော့ ခရီးသည် အယောက် ၄၀ ကျော်လောက်ပါတယ်တဲ့။ အခုအပြင်ရောက်တာ ၃၀ လောက်ပဲရှိသေးတယ် အထဲမှာ ၁၀ ယောက်ကျော်လောက် ညှပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ ... ဇင်တို့ အထဲမှာ ရှိတာသေချာတယ်။ ကားထဲမှလည်း ငြီးငြူသံ အော်ငိုသံကြီးတွေ ကားကိုထုနေတဲ့ အသံတွေကလည်း ရင်နဲ့ မဆံအောင် ကြားနေရတယ်။
ကားမှာလည်း ပက်လက်လန် အနေအထားဖြစ်နေပြီး မှန်တံခါးပေါက်တွေ ရေထဲရောက်နေတာမို့ ရှေ့အတက်အဆင်း တစ်ပေါက်ထဲ ၀င်မယ် အလုပ် ထိုနေရာက ရေပိုမြုပ်နေတယ်။ မထူးဘူးဆိုပြီး ကားမှန်တံခါး ပွင့်နေတဲ့ နေရာကတဆင့် ကားထဲသို့ ငုပ်ဝင်လိုက်တယ်။
ကားထဲ ရောက်တော့ မှောင်အတိပါ အလင်းဆိုတာတမှုန်လောက်တောင် မရှိ... နောက်ကနေ ကျွန်တော်နဲ့ လူ သုံးယောက်ကားထဲကို အတူလိုက်ဝင်လာတဲ့ အသံကြားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဇင့် နာမည်ကို တသွင်သွင် အော်ခေါ်မိတယ်။ ၀င်လာတဲ့၃ ယောက်ကိုတော့ ....
“လူတွေ့ရင် အသက်ရှိလား မရှိလား အရင်စမ်း ..အသက်ရှိသေးရင် အပြင်ကယ်ထုတ် ” လို့ ပြောလိုက်ပြီးတော့ လူတွေကို လိုက်စမ်းပြီးနေလိုက်တယ်။ မီးရောင် ဖြတ်ကနဲ မြင်လိုက်ရလို့ ဒီလူတွေဘယ်ကနေဘယ်လို ဓာတ်မီးရေအောက်ကနေ ယူလာပါလိမ့်။ ထိုလူတွေပဲ အသက်ရှိသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ထမ်းထုတ်သွားတော့ သူ့ဆီကပဲ ဓာတ်မီးကို ငှားပြီး ဇင့်နာမည်ကို အော်ခေါ်နေမိတယ်။ မိမိကိုယ်မှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံးရေတွေစိုနေလို့ မချမ်းအားပါဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ သောကစိတ်တွေက ကျွန်တော့်ကို နှိပ်စက်လို့ နေပြီ။ အရင်ဆို ဒီလို ကားအက်စီးဒန့် ဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆို ဝေးဝေးကရှောင်တယ်.. စိတ်မချမ်းသာလို့ပါ။ ဇင့် နာမည်အော်ရင်း ကားရှေ့ဘက်မှာ မတွေ့တာနဲ့ ကားအနောက်ဘက်ကို သွားအော်နေမိတယ်။ နာမည်အော်ခေါ်နေတုန်း စိတ်ထဲအသိစိတ်က နွေးကနည်း ဖြစ်သွားတာကြောင့် နောက်လှည့်ပြီး ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တော့ ဇင် ရယ်ပါ။ ဇင့် ရင်ညွန့်လောက်ကို ရေတွေမြုပ်နေသလို ဇင့်မှာ ထိုင်ခုံ ၂ခုကြားညုပ်နေတာကို မချိမဆံမြင်လိုက်တော့သည်။
ဇင် ကျွန်တော့်ကို တွေတွေကြီး ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလောက် နာမည်ခေါ်နေရဲ့သားနဲ့ ကို မထူးပဲညိမ်နေတယ်။ ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေ ပေါက်ပေါက်ကျလာသလို ဇင်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်တွေကျလို့ လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံမထွက် အံ့ကြိတ်ခါ ငိုနေတော့တယ်။ ဇင် ရယ် တော်တော်စိတ်ဓာတ်ပြင်းလှချီလား .. ကျွန်တော့်ဇင့် ကို အရင်ဆုံး အသာဖက်ထားပြီး...
“ဇင် ..ဘာမှမပူနဲ့ နော်..ကိုကြီးရှိတယ် ခု ဇင့်ဘေးနားမှာ ကိုကြီးရှိတယ် သိလား...”
ဇင် ကျွန်တော့်ကို မော့ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမျက်နှာကတော့ တင်းရိနေတယ်။
“ဇင် နဲ့ အတူတူပါလာတဲ့ ကောင်လေးရောဟင်...”
ပြောလိုက်တော့ ဇင် သူ့ဘေးကို တစ်ချက်စောင်းကြည့်ပြလိုက်တော့ ဇင် နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်း ခုံတွေကြားမှာ ကျောသာပေါ်ပြီး ရေထဲမြုပ်နေပြီး အသက်မဲ့နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု... ဇင် တွေတွေကြီးကြည့်နေတုန်း ကျွန်တော့်ဇင့်ကို ခုံ၂ခုကြားမှာ အသာမပြီး ဆွဲထုတ်တော့ ဇင့်အော်ပါလေရော ... သေချာကြည့်လိုက်တော့ ခုံအောက်ခံ သံယက်တစ်ခုက ဇင့်နောက်ကျောမှ တဆင့် ထုတ်ခြင်းပေါက် ၀င်ရောက်နေပြီ။ ဖြစ်ရလေ ဇင်ရယ်... ဇင် ဝေဒနာကို အံကျိတ်ခံနေပုံရတယ်.. မျက်ရည်တွေကျနေပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုအားယူရင်း ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေပြီး ....
ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေနဲ့ မော့ပြီးပဲကြည့်လိုက် တော့တယ်။
“ကိုကြီးရဲ့ အချစ်တွေက ဇင်နဲ့ မတန်ပါဘူး ကိုကြီးရယ်... အစက ကိုကြီးဆီက လိမ်ညာပြီး ချူစားဖို့ အထိကြံရွယ်ခဲ့ပေမယ့်..ကိုကြီးက ဇင့်ကို တကယ့်အချစ်တွေနဲ့ ချစ်နေတော့ ဇင် မလုပ်ရက်ဘူး ကိုကြီးရယ်..”
“ဇင်ရယ် စကားတွေ အများကြီးမပြောနဲ့နော်...”
“ဇင် ထပ်ပြီး မတောင့်ထားနိုင်တော့ဘူး.. ဇင် ဒီဘ၀ ဒီလောက်ပဲ ထင်တယ်... ကိုကြီးရယ်...”
ဇင် ငိုလေပြီ။....ချုံးပွဲချ ငိုခြင်းဖြစ်တယ်... ဒီတခါ ဇင် ငိုနေတဲ့ မျက်နှာဟာ.. ၀မ်းနည်းခြင်း နှမျောခြင်း... နောင်တရခြင်း ပေါင်းစုံနဲ့ အတူ..
“ဇင် နောင်တရတယ် ကိုကြီးရယ်... ဒီလိုအချိန်ရောက်မှာ ကိုကြီးရဲ့ အပြုစုအယုလေးတွေ အကြင်နာလေးတွေကို ပြန်ပြီး သတိရမိတယ် ကိုကြီးရယ်... ဇင်တော့ အမှားကြီး မှားသွားပြီ ... ဇင့်ကို ခွင့်လွတ်ပါ ကိုကြီးရယ်..”
ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပြီး ဇင့်ကို ဖက်လို့ သာငိုတော့တယ် .... ဒါပေမဲ့ ဒီလိုငိုနေလို့ မဖြစ် ဇင့်ကို အပြင်ရောက်အောင် ထုတ်ရမည်။
“ဇင် တောင့်ထားနော်... ဒီထိုင်ခုံကို ရအောင် ဖယ်မယ် သိလား...”
ဇင် ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်... သူ့ကျောနောက်က ၀င်နေတဲ့ ဒီသံယက်တွေက ဆွဲသာနှုတ်လိုက်ရင် သူဘယ်လောက် အသည်းခိုက်အောင် နာလိုက်မလဲ ဆိုတာသိသည်။ ကျွန်တော် ဇင့်ကို အားမွေးထားပုံစံနဲ့ အားတင်းပြရင်း.. ဇင့် အနောက်ဘက် ခုံကိုသွား ..အားကုန်ဆောင့်ဆွဲလိုက်ရာ ဇင် ထံမှ ငယ်သံပါအောင် အော်သံ ကြားရတော့သည်။ ခုံနဲ့ ငြိနေရာမှ လွတ်သွားပေမယ့် ဇင့်မှာ သတိလစ်သွားလေပြီ။ ဇင့် ကို အသာလေးပွေ့ထူ.. ဇင့်ပါးလေးကို အသာလေး ရိုက်နှိုးလိုက်တော့ ဇင့် ဆီကငြီးသံသဲ့သဲ့နဲ့ အတူသတိရလာပြီး ကျွန်တော့်ကို အပြုံးလေးသဲ့သဲ့ ပြုံးပြပြီးတော့...
“ဇင် စကားတွေ မပြောတော့နဲ့နော်...”
“ဒီအချိန်မှာ လိမ်ဖို့ စကားတွေ မရှိပါဘူး... ဇင် ကိုကြီးကို ချစ်တယ်... ဇင် နောက်ဆုံးအချိန်များ ဖြစ်နေလို့လား မသိပါဘူး... ဇင် နောင်တတွေရနေပြီ ကိုကြီး ရယ်”
“ဇင်ရယ် မပြောပါနဲ့ .. ကိုကြီးက ချစ်နေရရင်တော်ပါပြီ... ဇင် ဘာမှမပူနဲ့ ကိုကြီးမှာ ကားပါတယ် ... ဒီက ထွက်ပြီးရင် ဆေးရုံအမြန်သွားမယ်.. ”
ဇင့်ကို ဒီကားထဲက ထုတ်မယ်သာပြောတယ် ဘယ်လို ထုတ်ရမယ်မှန်းမသိ.. ကိုယ်တောင် ရေအောက်ငုံ့ပြီး မနည်းဝင်လာရတာ... တွေးရင် ရင်ထဲဆို့နစ်လို့ လာတယ်။
ဘုရားကယ်ပါလို့ စိတ်ထဲ အကြိမ်ကြိမ် ရေရွက်နေမိတယ်။ မထူးတော့ပြီမို့ ဇင့်ကို အသာကျောပိုပြီး..
“ဇင် အသက်လေးကို ခဏအောင့် ထားနော်..ခဏလေးရယ်... ”
ဇင် ကျွန်တော့်ကို မှေးစင်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ အင်အားမရှိတော့တဲ့ ပုံနဲ့ ကြည့်နေပြီးမှ နောက်ပြန်လှည့်ပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ စုပ်နမ်းလို့နေတယ်။ သူ့ရဲ့ အနမ်းလေးရပ်ထားမှ.. ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်...
“ဇင် ခဏလေးနော် အသက်အောင့်လိုက်နော်... ”
ပြောပြီး ကျွန်တော်ရေထဲ ငုပ်ပြီး ကားအပြင်ဘက်ကို ကြိုးစား ထွက်လိုက်တယ်... ရေထဲရောက်နေတော့ ဇင် ကျွန်တော့်ကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားတယ်..သူဖက်ထားပုံ သူ့လက်ကအားတွေက ကျွန်တော့်ကို အားကိုးတဲ့ လက်ကလေးတွေပါ... ကားအပြင်ရောက် ရေထဲက နေဘွားကနဲ့ ပေါ်လာတော့ အသက်ရှုရင်း ကားလမ်းကုန်းပေါ်သို့ ဇင့်ကိုကုန်းပိုးရင်း ပြေးတက်လာမိတယ်..
“ဇင် အားတင်းထားနော်... ကိုကြီး ကားနားရောက်တော့မယ်... ဇင် အားတင်းထား... ဇင်.. ဇင်...”
ကားလမ်းပေါ်ရောက်တော့ ကုန်းပိုးထားတဲ့ ကျောဘက်မှ ဇင့် ရဲ့တုန့်ပြန်သံ ဘာတစ်ခုမှ မကြားရတော့ပေ.. ဇင့်ကို အသာလမ်းဘေးမှာ ချပြီး လှုပ်နိုးကြည့်တော့ ဇင်တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ ဇင် လူ့လောကကြီးက ထွက်ခွာသွားပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ထားခဲ့ပြီ.. ဇင့် အသက်မရှိတော့ပေ... ကျွန်တော့် ကြောင်ငေးကြည့်နေရာမှ ဇင့်ကို ရင်ခွင်ထဲ လေးကွေးစွာ ထွေးပွေ့ထားလိုက်ပြီး အသကုန် အော်လို့သာငိုပစ်လိုက်တယ်... ပါးစပ်ကလည်း ယောင်ရမ်းပြီး အော်ပြောနေတော့တယ်...
“ဇင်... ဇင်... ရယ်... ကိုကြီးကို အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ ဇင်ရယ်.. ကိုကြီးကို... သတ်လိုက်ပါလား... ဇင် မသေပါနဲ့.... ကိုကြီးသေချင်တယ်... ဇင်ရယ် ကိုကြီးလေ ခက်ရပြီ...
ကယ်ကြပါဦးဗျာ .... ကျွန်တော့် ချစ်သူ ခုလေးတင် အသက်ထွက်သွားတာ ထင်ပါတယ်... ကူညီလို့ ရရင် အချိန်မီမယ် ထင်ပါတယ် ဗျာ.... ကယ်ကြပါဦးဗျာ... ဇင်.....ဇင်.... ဇင်..... ထပါဦး ဇင်ရယ်.... ကိုကြီးကလေ ဇင့်ကို ချစ်တာ... ချစ်တာမှလေ တခါမှ မချစ်ဘူးတဲ့ အချစ်နဲ့ကို ချစ်တာ.. ဇင့် အကြောင်းတွေ သိရဲ့သားနဲ့ အားလုံးခွင့်လွတ်ပြီး ချစ်တာ.... ကိုကြီးလို လူမျိုး လောကမှာ ရှိမယ်တောင် မထင်ပါဘူး...ဇင်ရယ်...ဇင် သိပါတယ်... ဇင်ရယ်... ကိုကြီးကို ခေါ်သွားပါတော့လား.... ဇင် ရေ... ဇင့် ၀ိဉာည်ဒီနားမှာပဲ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား...
ကိုကြီး အဖြစ်ကို ကြည့်စမ်းပါကွာ... ကိုကြီးကို သနားရင် ...ဇင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြန်ဝင်ပါကွာ.... ကိုကြီးသိတယ်... ဇင် ဒီမှာပဲ... အားးး.....သေပါပြီ ဗျာ... ကျွန်တော့်ကို လာသတ်ကြပါခင်ဗျာ...... ကျွန်တော် သေချင်လိုက်တာဗျာ….
.......................... .............. ...................... .................... ............. ........................... .................. . ... .. .. .. .
မျိုးကျော်တယောက် ၀မ်းနည်းတာရော ဒေါသတွေကော စိတ်အစဉ်တိုင်း ခံစားမှုပြင်းထန်စွာခံစားပြီး ရောက်တတ်ရာရာ အော်လို့နေတယ်။ မျိုးကျော်စိတ်ထဲ ကားလမ်းပေါ်မှာဘယ်သူမှ မရှိပါ... သူရယ်... ၀ိညဉ်မဲ့နေတဲ့ ဇင့် ခန္ဓာကိုယ်ရယ်.။ တစ်လမ်းလုံး အမှောင်အတိ လူသူကလည်း ကင်းမဲ့နေတယ်။ မျိုးကျော် ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်ခါ ဇင့်ကို ပွေ့ထားလျက်ပင် အထပ်ထပ် ငိုကြွေးနေဆဲပါ။
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၆) ဆက်ဖတ်ရန် »